कोरोना भाइरस महाव्याधिमा कसरी गर्ने बजेट व्यवस्थापन ?
गएको महिना धेरै थोकबाट टाढा बस्नुपर्‍यो। रेस्टुरेन्टको परिकार, जन्मदिनको पार्टी, दाह्रीकपाल काट्ने साथीभाइको बहुमूल्य अँगालो पनि हरायो। धेरै जनाको काम घटेसँगै, खर्च पनि कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो।
बाहिर खाने र पेट्रोलको पैसा बचाउने मात्रै नभएर कोरोनाभाइरसको महाव्याधिमा पनि बचत गर्नुपर्ने भयो। भविष्य अनिश्चित हुँदा खर्च कटौती कसरी गर्ने ? सबैको मनमा यो प्रश्न खट्किएको छ।
केही ठूला खर्चमा ध्यान दिने
ठूलो खर्चले बजेटमा पनि ठूलै प्रभाव पार्छ। न्यूयोर्क टाइम्सको बेस्ट सेलर “आइ विल टिच यु टु बि रिच” का लेखक तथा व्यक्तिगत वित्तका विशेषज्ञ रमित सेठी भन्छन्,“सानातिना बीस वटा खर्चभन्दा दुई वटा ठूलो खर्च व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।”
आवास, यातायात र खाना तीन ठूला खर्चबारे विचार गरौं। दुई वटा कार वा मोटरसाइकल भए, एउटा मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले धेरै व्यवसाय बन्द छन्। त्यसैले रेस्टुरेन्टको खर्च पनि निकै घटेको होला। नभए, त्यसमा पनि ध्यान दिन सकिन्छ।
लजेट्टा ब्राक्सन प्रमाणित वित्तीय योजनाकार हुन्। उनी अमेरिकाको बाल्टिमोरस्थित फाइनान्सियल फाउन्टेन्स नामक योजना कम्पनीकी संस्थापक पनि हुन्। स्थिर आम्दानी र राम्रो क्रेडिट भएका घरवाला/घरबेटीले बैङ्कको ब्याजदर घटेको बेला “रिफाइनान्सिङ” गर्नसक्ने उनी बताउँछिन्। घरबेटीसँग कुरा गरेपछि घरभाडा घटाइएको वा कसैलाई मिनाहा गरिएको सेठीले बताए। उनका धेरै पाठकहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका रहेछन्।
घरमा बसेर बचाएको पैसालाई महत्व दिनुहोस्
बन्दाबन्दी छ। सबै जना घरैमा बसेका छन्। धेरै जना विभिन्न परिकार बनाउन थालेका छन्। कसैलाई कसरत गर्ने महँगो साइकल किन्नुपरेको छ। यो समयमा महँगो रूचि वा घर र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने विषयले लोभ्याउँछ। तर अहिले घरैमा बसेर बचाएको पैसा बचत खातामै राख्नु महत्वपूर्ण हुने ब्राक्स्टन बताउँछिन्।
अहिलेको सय रूपैयाँ पछिको दुई सयभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ
यति धेरै अनिश्चितताबीच आर्थिक निर्णय गर्दा नगद व्यवस्थापनमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। यो वर्ष विवाह वा कतै घुम्न जाने योजना भए, त्यसलाई रद्द गर्ने कि? पछि धेरै खर्च लाग्नसकछ।
“बेरोजगारी र अनिश्चितता बढिरहेको अहिलेको समयमा खल्तीमा भएको पैसा पछि हुने पैसाभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ,” ब्राक्स्टन भन्छिन्।
एक वर्षपछि मूल्य बढ्ने कार नै निक नहोस्, यो सल्लाह भावी खरिदमा मात्रै नभएर अहिले खर्च कम गर्न सकिने सबैमा लागु हुन्छ। यु निड अ बजेट नामक बजेट सफ्टवेयरका संस्थापक जेस्सी मेकमले यस्तो समयमा व्यक्तिले कर्जाका लागि न्युनतम भुक्तान मात्रै गरेर सकेसम्म धेरै नगद बचाउने बताए।
आवश्यकता र चाहनाबीच प्रष्ट हुने
हामीलाई धेरै थोक महत्वपूर्ण लाग्छ। केबलको ग्राहक शुल्क, जिमको सदस्यता, जन्मदिनको उपहार, डेटिङको रात, साँझ वाइनको चुस्की अरू थुप्रै। तर विश्वव्यापी महाव्याधि र आर्थिक मन्दीबीच यी खर्च वैकल्पिक लाग्न थालेका छन्।
टेक्सासको वित्तिय शिक्षासम्बन्धी ब्रेभर्ली गो नामक कम्पनीकी संस्थापक कारा पेरेजले फुर्सद पाएकाहरूले यो समय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट हेर्ने तथा आवश्यक र वैकल्पिक खर्च छुट्याउन प्रयोग गर्ने बताइन्। “खर्च हेर्ने र आफूले गरेको खर्चबारे मनन गर्नु निकै उपयोगी हुन्छ,” पेरेजले भनिन्।
रोजगार गुमाएका वा आर्थिक सङ्कटमा भएकालाई आवश्यक सामग्री कटौती गर्नुपर्दा निकै कठिन भएको छ। त्यसैले मदिरा, नेटफ्लिक्स, कहलिएका ब्रान्डका सामग्रीको खरिद कटौती गरे केही राहत हुनेछ।
आवास, इन्टरनेट, पानी, बिजुली, फोन, बीमा र कर्जाजस्ता खर्च पूर्ण कटौती गर्न सकिदैन। तर यस्तो बेला वार्ता गर्न सकिन्छ। सेवा प्रदायकलाई फोन गरेर आफू वफादार ग्राहक भएको बताउन सकिने सेठीको सुझाव छ। साविकको खर्च पुर्‍याउन कठिन भइरहेको उनीहरूलाई बताउने र विकल्प खोज्न सकिन्छ।
“नतिजा गज्जब छ,” सेठीले बताए। सङ्कट सुरू भएदेखि उनका केही पाठकहरू वार्ता गरेरै खर्च घटाउन सफल भएका छन्। उनले भने,“यी कम्पनी सकेसम्म पैसा उठाउँछन् र तपाईंलाई खुशी बनाउँछन्।”
तर पछि ब्याज वा शुल्क बुझाउनुपर्छ कि भनेर सोध्न नभुल्नुहोस्। सबै खर्च घटाउने प्रयास गर्नु उचित हुने मेकमले बताए। “यो वातावरणमा वार्ता गर्ने थुप्रै स्थान छ। प्रत्येक खर्च वार्ता गर्न सकिन्छ। सुरू आफैंबाट गर्नुपर्छ।”
योजना बनाउने,कार्यान्वयन गर्ने
सबै प्रश्नको उत्तर नभए पनि यथाशिघ्र काम गर्नुपर्ने सेठीको सुझाव छ। “तपाईंको काम के हुन्छ थाहा पाउनलाई हाकिम नै कुर्नु पर्दैन। अर्थतन्त्रबारे नेताकै विश्लेषण पर्खिनु पर्दैन। आफूले नै परिस्थिती विचार गर्ने, योजना बनाउने र लागु गर्न सकिन्छ।” खर्च घटाउन तनाव भए आफूलाई पुग्ने न्युनतम खर्च निर्धारण गरेर अघि बढ्न सकिने पेरेजले बताइन्। चिन्ता मानेर केही हुँदैन। तर कटौती तुरून्तै सुरू गर्नुपर्छ।
खर्च कटौती गर्न नहुने
पहिले घर र सवारी साधनको मर्मत खर्च बचाउन नछाड्नुहोस्। “महाव्याधि होस् कि नहोस् केही न केही त मर्मत गर्नु परिहाल्छ,” मेकम भन्छन्,“त्यस्ता ठूला, तर सधैं नहुने खर्चका लागि आफू तयार हुनुपर्छ।”
जीवन बीमा रद्द गरेपछि फेरि सुरू गर्न गाह्रो हुनसक्छ। सम्पत्ति मालिकलाई बीमाको किस्ता बढाउँदा पनि कठिनाइ हुनसक्छ। अहिले सबै जना यो कठिना सङ्कटमा छौं। जीवन केही सहज बनारहेको सेवा वा सुविधाको खर्च काट्न हतार पनि नगर्नुहोस्।
“यो अभूतपूर्व समय हो। मानसिक र आर्थिक रूपमा कठिन समय पनि हो। आफूलाई खुशी दिने केही राख्न सकिन्छ भने, त्यसमा सम्झौता नगरेकै बेस्।”
Published Date: Tuesday, 5th May 06:37:20 AM